Faarax “Cawl” Maxamed Jaamac | maktabadda | Af-Soomaaliga
Tag Archives: Faarax “Cawl” Maxamed Jaamac
16/09/2014 Dhibbanaha Aan DhalanFaarax “Cawl” Maxamed Jaamacmaamule
“Nin walba halkii bugtaa isagey belbeshaaye, nin hooyadiis oohinteed maqlayow koleyba waa eedaadkaaye adigiyo urugadaa dheh, nin walaashiis ka ag barooraneysow ciishootaye adigiyo ciilkaa dheh, anigana tiiraanyadey iyo taahey dheh, saa gabartaan jeclaa baan ba’aydeeda haweeniyo baroorteed maqlayaa, magaceedu waa Bilan, bil soo baxday weeye, qalbigey bishaa, oo ballan baanu lahayn, quruxdeedu waa dhif, biyo dahab la moodaa, jidhkeedu waa xariir, dun macaan ka bow dheer, anuun baa maleyn kara. Bilan Aw Jaamac abuurkeedu waa yaab, waa murwadii riyadeydee, col ma loo quudhi karaa?”
Dunideenu waa yaab badan tahaye, waxaa dhacday gabar labaatan sano jirta oo Bilan Aw Jaamac la yiraahdo, inay maalin maalmaha ka mid ah sannadkii toddobaatan iyo siddeeddii ari ku ilaalineysay goor barqo ah deegaanka u dhexeeya magaalada Jigjiga iyo Wardheer.
Bilan, sidey arigii ula joogtay, bey waxay soo dul joogsatay haro xareed qabow ah, wax kale ma sameyne intay hareeraha iska eegtay, ayey dharkii iska dhigtay oo haradii ku gashay garbasaarteedii khafiifka aheyd oy guntatay keliya, halkaasey intay biyihii harada dhexdeedii ku laba legdeysay sidii aanay waxba ka maqneyn hadba hees qaadday, oo marba si isu rogrogtay.
Bilan ma ahayn nafleyda keliya oo harada ku raaxeysaneysay, ee shimbiruhuna farxad iyo ladnaan ayey hadba codad kala geddisan la waq-waq-wis-wiis lahaayeen. Rahuna dhaqan ha ka ahaatee, markuu dhergo reynreyn ayuu la dha-dhaa lahaa.
Gedigood nafleydaas harada joogay, ha ahaato mid qadhaab ka soo dhergey, ama mid sidiisa u faraxsan, nolol adduunyo iney u dhan tahay u ahayd, khaas ahaan Bilan sidey dunida keligeed leedahay ayey cabsi iyo werwer la’aan, marba si u dabbaalatay, marey jirjirka u dabbaalato, iyo marey hadba dhinacyeyso iyo marey hadba hoos u muquurto.
Bilan, waxay ka dhalatay qoys reer guuraa ah, oo Soomaali ah, aabbaheed iyo hooyadeedna waa nooleeyeen, waxayna walaalo ahaayeen gabar ka weyn oo beryahaas la aroosay iyo labo wiil oo kan ugu yari qoyska yahay saddex sano.
Aw Jaamac, Bilan aabbaheed, wuxuu ahaa wadaadka beelaha meesha dega, oo aad looga dambeeyo, carruurtiisana diinta Islaamka si fiican u baray, khaas ahaan Bilan soddonka jis ee Quraanka xaafid bey ku ahayd, edebteeda iyo hab dhaqankeeda gabadheedna beesha aad baa looga kuunyi jirey, aabbaheedna waa addeeci jirtay, wuxuuna had iyo jeer ugu ducayn jirey, “Ilaahow Bilan meel roon mari, oo rug wanaagsan deji, qayrkeedna dhaafi.”
Maalintaas ay harada ku dabbaalaneysay, malaa’igta iyo lama arkaanka nololeed ka sokow, waxaa muuqaalkeeda iyo jidhkeeda qurxoon nasiibsaday inuu si buuxda u daawado inan Dalal Cumar la yiraahdo oo isna Soomaali ah oo si kedis ah harada usoo dul joogsaday, iyadoo aan arkeyn.
Dalal Cumar, oo siddeed iyo labaatan jir ah, wuxuu ka tirsanaa isla beelaha meesha deggan, wuxuuna ahaa inan madi ah, gabdho walaalo ahna aan lahayn, hooyadii iyo aabbihiina dhinteen isagoo yar, hase ahaatee, wuxuu la joogay adeerkiis oo xoolo badan leh, soona koriyey.
Dalal intuu ka il horreeyey Bilan, ayuu dharkeedii ka hoos qaaday geedkay hoos dhigtey, oo meel ku qariyey. Dabadeedna intuu dib u soo beerdhigaaleeyey ayuu hoos jiifsaday geedkii uu dharkeeda ka qaaday, si uu riwaayadda ay dhigeyso uga daawado.
Dalal, meelaan ka fogeyn harada ayaa geeloodii u daaqaayey, si fiicanna uma garan gabarta meesha ku dabbaalaneysa, hase ahaatee tilmaamaha uu quruxdeed ka heystay, iyo sheekooyinka uu ka maqlay cidaha, waxuu malihiisii siiyey inay tahay Bilan Aw Jaamac.
Run ahaantii iskuma taxalujin garashadeeda ee waxuu jeclaystay daawashadiisa ay hadba meel muujineysay. Mar waxaaba ku soo dhacday inuu dharka intuu iska dhigo harada la galo, haddana intuu is qabtay ayuu isku yiri, Bal sii yare daawo, sidaanay ku macaan tahay.
Bilan waxay hadba hab u dabbaalato, oo meel walac ka siiso, maruun bey danniday in la weheliyo, markaasay intey xaggiisa u soo dabbaalatay ku soo dhowaatay oo wax eeg eegtay. Waxbase mey arag, maxaa yeelay beerkuu dhulka ku dhejiyey. Halkaasey halkeedii dabaashii ka wadday iyadoo marba doc isu rogrogeysa, marna xagal isu teegeysa, oo muujinaysa mudanaayaasheeda oo caaradooda af bakeyle la moodo.
In cabbaar ah markay sidaas u dabbaalaneysay, ayey haradii ka soo baxday, soona beegtay xaggiisii oy dharkeedii ku ogeyd, iyadoo biyihii ka da’ayaan, caado ha ka ahaatee qunyar socodku, ama markaas heys yeelyeeleysee, waxay xaggiisii soo beegtay iyadoo tallaabo talantaali ah, oo hab iyo xarrago leh, si habsami ah u dhigeysa, timaheedii dheeraana hadba intey madaxa weyraamiso biyaha ka shax shax siineysa.
Waxay marba isa soo dhugdhugato, oo gacmaheeda dhaadheer ee garaaraha lahaa soo weydhaamiso, maruun bey si lama filaan ah u dareentay dhaadkeeda oo gacan dad kaga dheggan tahay.
Intey cirkaas ka qeylisay oo tiri “Hayaay!” bay hoos wax u eegtay, misa yaabkeeda waa nin dhallinyar oo beerka u jiifa gacantiisii. Malaha geesinimo ay u dhalatay sabab ha u ahaatee, intey gacmaheedii ku nabsisurtay, bey si qumaati isu taagtay, oo ku tiri, “War hoy i siidaa, Ilaaha ma taqaan? Maxaa dhaadka ii heysataa? Waan ku baryayaa, waxbana kaama sitee, key iska daa, oo key iska daa,” ayey haddana ku celcelisay.
Erey ma celine, isagoo u maleynaaya inuu riyoonaayo buu hadba meeluu uga bogey jidhkeedii qurxoonaa, oo midabka dahabiga ah yeeshay, markii cadceeddii barqo qabatay dhaayaha marba meel ku nasiyey.
Mar dambe buu yiri, “Wegerey, weger, waxba igama sidatid miyaa? Wahey, wah, ma saasaa kaa dhab ah? Wax wacan ayaa iga sidataa. Waligeyna gabadh aan dhaadkeeda haleeley sahal uma siideyn. Waabase adoo sidan wacan ah,” buu ugu jawaabey isagoo aad mooddid aar raq helay, oo ku haliilaaya baahi heysa darteed.
“Horta miyaa leys gaadayaa?” ayey tiri.
“Maya bareerna waa aqaan,” buu ugu jawaabey.
“Haddee i siiddaa, sidani waa gaadmo e.”
“Haba sheegin siideyn.” Dabadeedna intuu gacantiisii kale lugteeda kor ugu tafay ilaa bowdada ayuu yiri, “Ayaankee, ayaankee, ma anaa gabar qaawan talo weydiiya? Sow wax keliya oo ii harsan leged ma aha?”
Bilan waxaa u caddaatay iney dabin gashay, weliba midaanay ka bixi kareyn, baryona aanay waxba tareyne ay isdaafacdo.
Sidaas awgeed, intey indhaha isku qabatay ayey dhaqdhaqaaq bilowday iyadoo leh, “War hoy waan ku tuugayaaye key iska daa, oo iga xishoo yaan xaal ku raacine.”
Dalal markuu dareemay is dhifdhifadkeeda, ayuu qumaati isugu taagey intuu labada gacmood ka buuxsaday, waxaana bilaabmay legdin iyo laacdan hor leh oo leysu naxayn. Bacdamaa Bilan qoyaneyd, garbasaar keliyana xirneyd, hadba markuu is yiraahdo haddaad taabatey ayey ka muruxsaneysay.
In cabbaar ah wax leys ligligaba, leyslana xiiqay, ayuu mar keliya tabco gudeed la helay oo jirjirka u ridey. Halkaasaa leysla galgashay oo hadba leysla dhinacayey.
Haddeyse aragtay, in laga xoog roonaaday beylahana ay u tahay baahidiisa ayey halkaas shafka ah qaniinyo kaga dhejisay, markaasuu doc intuu iskaga dhiftay dharbaaxo aan kululeyn iskaga furfuray.
Waxay isla galgalshadii socotaba, aakhirkii ayuu garbasaartii ka tuuray, oo si fiican labada gacmood ugu taabey. Hase ahaatee, jidhka meel waliba meel lehe, markuu culeyskiisii iyo canbuskiisii ku dareensiiyey abuurkeedii dheddignimo, ayna si oggol diid ah u jid debcisay, oo uu haahaabasho galay, ayey mar keliya si lama filaan ah intey caloosha ku qaadday doc isaga tuurtay, oo in il biriqsi ka yar toban tallaabo meel u jirta u booday, in yar kaddibna dharkeedii xiratay. Waxse helay mooyee, markey xiratay dharkeedii ayey xaggiisii ka maqashay taah iyo qeylo uu ku leeyahay, “Aah! Aah! Naa qoriga iga bixi.”
Ugu horreyntii waxay u qaadatay iney khayaamo ka tahay. Goortaasay intey isa soo dul taagtay, intey yare qososhay ku tiri, “Ma anaa mar kale i dagi kartaa?”
Taahii iyo qeyladii ayuu sii kordhiyey intuu u muujiyey meeshuu qoriga kaga taagnaa oo ah gosha. Markaasey aragtay inaaney khayaamo ka aheyne arrintu dhab tahay, oo ku soo dhaqaaqday, oo qorigii ka soo siibtay. Isla markaasna waxay ka joojisay meeshii oo dhiig ka soo daatay intey xuf yar maradeedii ka soo jeexday. Kaddibna intey kicisay ayey ilaa xaggii haradii u garab gashay, halkaasoo ay gacmaheedii ku waraabisay, uguna weji dhaqday si uu u nafiso.
In cabbaar ah markuu nasanaayey iyana ag fadhido oon leysla hadlayn, ayuu yiri, “Waad mahadsantahaye, sow gabarta Bilan la yiraahdo ma tihid?”
“Ma ahiye maxaad ku tiri, mise horaa ii aragtay?”
“Maya hore kuuma arag, laakiin dhallinta beeluhu gabar walba sheeko iyo tilmaan ayey ka heystaan.”
“Maxay iga haysataa, ood igu aragtaa?”
“Waxaan kugu arkaa qurux aan la maleyn karin, iyo raxiimnimo.”
Dumar waa ammaane, iyadoo sii jecleysanaysa hadalkiisiis, bey intey yare xishootay hoos eegtay oo tiri, “Illeyn ficilka xun ood isku dayday waxaa kuu dheer hadalka beer laxawsiga degdegga ah iyo qaraaxadda.”
“Xaasha, an meelaan kugu saluugo ma lihid, haba kuu dheeraatee, hadal macaankaaga iyo hasaawe helkaaga.”
Inta malaha meeshii damaqatay ayuu yare taahay oo yiri, “Waxbaa iga raacay.”
“Haa, haa!” intey si tiiqtiiqsi ah u tiri, bey waxay tiri, “Runtii wadhi baa kaa raacday, gabar qaawan ood labadeeda dhaad haleeshay, haddana aadan calfan, sow dhallinta beeshu hadday ogaato kugu qosli meyso?”
“Taasi waa guubaabo.”
“Waxay tahayba, kaa badbaaday. Ogowna waxaad tahay ninkii u horreeyey oo cududdeyda qabtay.”
Isagii baa hadalkii qaatoo yiri, “Goorey ahaataba waa inoo ballan, waana inoo xiran yahay ballankaasi, horta e Bilan Aw Jaamac ma tahay illeyn hadal baad na jeexsiisay?”
“Waa ahay Bilan Aw Jaamac, adna key isu sheeg.”
“Waxaa ley yiraahdaa Dalal Cumar.”
“Ma Dalal Cumar baa tiri, Alley lehe Bahal Cumar baad tahay.”
Intuu qoslay buu yiri, “Gacalow tilmaan kale aan bahal ahayn miyaad ii weyday.”
Waxay ku jawaabtay “Dalalow, ma ahayn inaan qorigii gosha kaa galay kaa siibo, ee waxaa abaalkaagu ahaa inaan meesha kaaga tago, laakiinse qofkii ku xumeeyaa waa la xurmeeyaa, dadnimadaa sidaas ah.”
Markuu arkay habdhicii haasaawaha meeshey ka qabatay iney ka heshay buu yiri, “Horta xaal baan ku siiyey iga aqbal, hibashadana halkaas ku dhaaf, ballan dambena inoo xir, xiisaa inoo kala kordhayee.”
Waxba mey oran, ineyse oggol diid tahay ayuu dareemay, halkaasuu ku noqdoo yiri, “Habeen dambe ayaanu cayaargud idiinku imaanaynaa, ee maxaad ka qabtaa?”
“Waxba kama qabo, ee sidaas ha inoo ahaato.”
“Waa tahaye nabadgelyo Bilaney.”
“Waa inoo sidaas iyo noolekulantee,” bay tiri.